Akhriso: Barnaamijka Siyaasadeed Ee Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle (Xaaf) – Goobjoog News
Axmed Ducaale Geelle Xuseen (Xaaf) oo ahaa ganacsade iyo xildhibaan dowladda dhexe ah 16-kii sano ee la soo dhaafay ayaa maanta magaalada Cadaado loogu doortay madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug.
Hadaba, Goobjoog News, waxaa ay akhristayaasheeda u soo gudbineysaa Barnaamijka Siyaasadeed ee madaxweynaha cusub ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xuseen (Xaaf).
Akhriso: Barnaamijka Siyaasadeed Ee Axmed Ducaale Geelle Xuseen (Xaaf)
Hannaan Siyaasadeed Oo Isla Xisaabtan Leh: Axmed Ducaale Geelle Xuseen (Xaaf) waxaa uu barnaamijkiisa ku sheegay in uu Galmudug ku hoggaamin doono kana hirgelin doono hannaan siyaasadeed oo ku dheehan isla Xisaabtan iyo hufnnaan.
Ka faa’ideysa Kheyraadka: Axmed Ducaale Xaaf waxaa uu sheegay in maamulka Galmudug uu ka dhigi doono mid si fiican uga faa’ida kheyraadka dabiiciga ah Si Loo gaaro isku filnaashiyo Muddo kooban, lagana bixi doono gaajada, waxaa kaloo ku sheegay in ay la soo bixi doono dahabka, kalluunka, shidaalka iyo xitaa in cunto iyo biyo loo heli doono dhibaatada xoolaha heysto.
Mudane Axmed Geelle Xaaf, waxaa uu barnaamijkiisa dowladiisa ku ballan-qaaday in in meel walbo oo Galmudug ah uu biyo geyn doono.
Midnimada: Barnaamijka Axmed Geelle, waxaa kale oo ka mid ahaa in uu ballan-qaaday in uu kasban doono kalsoonida shacabka Galmudug, maamul goboleedyada dariska ah iyo In la joojiyo dhibaatooyinka soo laalaabanaya kuwaas oo sida uu sheegay wiiqaya dowladnimada.
Dib U Heshiisiin: Waxaa Barnaamijka Axmed Geelle Xaaf ku jira, hirgelinta qorshe dib u heshiisiin, isaga oo ka bilaabayo sida uu sheegay Ahlu sunna Wal-Jamaaca oo uu ku tilmaamay culimaa’udiin asal ah iyo kuwa Galmudug dhexdeeda ku nool oo sababtooda magaalooyinka iska gaari la’yihiin.
Xaqiijinta Amniga: Amniga waa laf-dhabarta barnaamijka Axmed Geelle Xaaf, la’aantiisa lama noolaan karo, waxaa uu ballan-qaaday dhismaha ciidan hufan oo ka shaqeeya nabadda Galmudug, in uu siin doono ciidanka mishaar iyo wacyigelin. Geelle waxaa uu sheegay in Galmudug heysato ciidan ku filan oo tayeysan oo aan heysan agab iyo kalsooni.
Cadaaladda Iyo Ka hortagga xad-gudubka: Barnaamijka Axmed Xaaf waxaa ka mid ah Cadaaladda, la’aanteedana aan waxbo la qaban Karin, isaga oo sheegay in haddii cadaalad la helo la ilaalin karo xuquuqda, nafta iyo maalka dadka.
Kobcinta Dhaqaalaha: Axmed Ducaale Geelle Xaaf, waxaa uu barnaamijkiisa ku sheegay in Galmudug dadkeeda aaney sabool aheyn ee saboolnimada ay tahay siyaasad xumida.
Waxaa uu barnaamijka uga hadlay awoodda canshuuraha iyo sida ay saldhig ugu tahay hantida dadka, Canshuurta waxaa uu ku sheegay oo kale in ay tahay mid dadka loogu shaqeynayo, oo jidadka iyo kaabayaasha dhaqaale lagu dhisayo, haddii canshuur la helo Dhaqaale la helaayo, cashuur qaadista iyo waxaa uu isku xiray shacab iyo dal quruxsan.
Mr. Xaaf waxaa uu barnaamijkiisa ku sheegay in Galmudug ay leedahay xeeb dhan 300 KM isla markaana uu ku dadaali doono sidii looga faa’ideysan lahaa xeebtaas iyo dekadda.
Axmed Ducaale Xaaf waxaa uu barnaamijka ku sheegay in Shacabka, Xildhibaannada, wasiirada iyo aqoon yahanka uu ka talin gelin doono wax walba oo go’aan laga qaadanayo
Aqalka Sare Oo Soo Bandhigay Xubnaha Liiska Kama Dambeysta Ah Ee Guddiyada 8-dda Ah